काठमाडौं । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अचेल राजनीतिक सभा–समारोहहरुमा खासै देखिँदैनन् । कारण, उनी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संविधानतः जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । बजेटसम्बन्धी काममा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री पौडेललाई हामीले आगामी बजेटका विशेषता के–के हुनेछन् भनेर सोध्यौं । वृद्ध भत्ता बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्यौं । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारणहरु सोध्यौं । अनि राजनीतिक नेताहरुको दबाव कस्तो आइरहेको छ भनेर पनि सोध्यौं ।
राजनीतिकरुपमा सत्ता समीकरणको खेल भइरहेकाले यसपालि तपाईले नै बजेट ल्याउनु पाउनुहोला त ? वा, सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित होला कि नहोला ? यी प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले यो सरकारले यो बजेटमात्रै ल्याउँछ भनेर नसोच्न आग्रह गरे । उनको आशय २०७९ सालको बजेट पनि यही सरकारले ल्याउँछ भन्ने थियो ।
माओवादीले सरकारप्रति विरोध पनि र समर्थन पनि जनाएर अद्भुत काम गरिरहेको नेकपाका एमालेका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म पनि स्थिति छैन ।’ फिर्ता लिँदा पनि सरकारले सदनको विश्वास आर्जन गर्ने अरु धेरै विकल्प त छँदैछन् ।’
प्रस्तुत छ– अर्थमन्त्री पौडेलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईहरु आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आगामी बजेट केमा केन्द्रित हुनेछ ?
हामीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धता छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । यसबीचमा पन्ध्रौं योजना तयार गरेका छौ । तात्कालिकरुपमा हाम्रा सामु आकस्मिक अभिभारा आइलागेका छन् । मुख्यगरी कोभिडको समस्या विश्व अर्थतन्त्रमै रह्यो । त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर रह्यो । कोभिडबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने विषय, अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र तिब्र आर्थिक बृद्धि दरतर्फ अगाडि बढाउने चुनौती हामीसामु छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर बजेट तयार हुनेछ ...
बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक
प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग मागे थप खोप
दिनहुँ हराउँछन् २२ महिला-बालिका
असोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण
विकासमा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बाधक : अर्थमन्त्री शर्मा
एभरेष्ट प्रिमियर लिग : पाकिस्तानका पूर्वकप्तान अफ्रिदीले काठमाडौं किंग्स–११ बाट खेल्ने